Iwu kuki - Franchiseek | Ohere ndi Franchise
Ebe nrụọrụ weebụ a www.franchiseek.com (“Saịtị anyị”) na-eji kuki na teknụzụ ndị yiri ya iji mee ka ị dị iche na ndị ọrụ ndị ọzọ. Site na iji kuki, Anyị na-enwe ike inye gị ahụmịhe kachasị mma na iji melite saịtị anyị site na ịghọta nke ọma karịa otu i si eji ya. Biko gụọ Iwu Aki nke ọma ma hụ na ị ghọtara ya. Echere na nnabata nke Iwu Kuki anyị bụ nke a ga-ewere ọnọdụ mgbe ị gara ma nyochaa saịtị anyị. Saịtị anyị na-eji kuki cookies kuki nke weebụsaịtị ahụ na nleta mbụ gị. Ọ bụrụ na ikwenyeghị na Iwu Nuki Anyị, biko kwụsị iji saịtị anyị ozugbo.
Nkọwapụta na Nkọwa
1.1 N'uba amụma kuki a, belụsọ ma ihe ọzọ achọrọ, okwu ndị a nwere ihe ndị a:
"Kuki" pụtara obere faịlụ etinyebere na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị site na saịtị anyị mgbe ị gara ụfọdụ akụkụ nke saịtị anyị na / ma ọ bụ mgbe ị na-eji ụfọdụ atụmatụ nke saịtị anyị;
Iwu "kuki" pụtara akụkụ dị mkpa nke Iwu Nzuzo na Kọmputa Elekere (EC Direction) 2003 na nke EU Iwu 2016/679 Iwu Nchedo Data General ("GDPR");
"Data nkeonwe" pụtara na data niile metụtara onye ama ama nke enwere ike ịmata ya ozugbo ma ọ bụ na -echeta data ahụ, dịka Iwu Nchedo 1998 siri kọwaa. OR Iwu EU 2016/679 Regulation General Data Protection (“GDPR”);
“Anyị / Anyị / Anyị” pụtara Infinity Business Grow Network Ltd., obere ụlọ ọrụ edebara aha na England n'okpuru nọmba ụlọ ọrụ 09073436, onye aha ya bụ 2 Bromley Rd. Seaford, East Sussex, BN25 3ES, onye isi adreese ahia ya bu nke ebighebi.
Ihe omuma banyere anyi
1.1 Ebe nrụọrụ anyị bụ Infinity Business Growth Network, nwekwaara ya Seaford, East Sussex, BN09073436 2ES, ma onye isi adre ahia ya di n’elu.
1.2 VAT ndebanye aha 252 9974 63
1.3 Onye na-ahụ maka nchekwa data anyị bụ Joel Bissitt, enwere ike ịkpọtụrụ ya site na email na [Email na-echebe], site na ekwentị na 01323 332 838, ma ọ bụ site na post na 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex, BN25 3ES
Kedu ka saịtị anyị si eji kuki?
1.1 Saịtị anyị nwere ike idowe ma banye na ya ụfọdụ kuki nke mbụ na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Kuki ndị nke mbụ bụ ndị anyị debere ozugbo, ọ bụ naanị anyị na-eji ya. Anyị na-eji kuki iji hazie ma melite ahụmịhe nke saịtị anyị yana iji nye ma melite ọrụ anyị. Anyị ahọrọla kuki ndị a nke ọma ma ewerela usoro iji hụ na echedoro ma na-akwanyere nzuzo gị mgbe niile.
1.2 Site na iji saịtị anyị, ịnwere ike ịnweta ụfọdụ kuki nke atọ na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Cookies ndị ọzọ bụ ndị webụsaịtị, ọrụ, na / ma ọ bụ ndị ọzọ na-edobere anyị. A na-eji kuki ndị ọzọ na saịtị anyị maka Ntinye nkọwa nke iji Kuki nke Ndị ọzọ, dịka ọrụ mgbasa ozi. Maka nkọwa ndị ọzọ, biko rụtụ aka na ngalaba nke 4 n'okpuru.
1.3 Kuki niile nke eji na saịtị anyị ka eji. Anyị nwere ike iji ụfọdụ kuki ụdị a:
3.a.1 Kuki siri ike
Kuki ga-adaba na ụdị a ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka arụmọrụ saịtị anyị, na-akwado ọrụ dịka ịbanye, nkata ịzụ ahịa gị, na azụmahịa ịkwụ ụgwọ.
3.saịlịkuki kuki 2.a.XNUMX
Ọ dị mkpa ka anyị ghọta otu i si eji saịtị anyị, dịka ọmụmaatụ, otu ị ga - esi nwee ike ịgagharị na gburugburu ya, yana njirimara ndị ị na-eji. Nchịkọta Cookies na-enyere anyị aka ịchịkọta ozi a, na-enyere anyị aka imezi saịtị anyị na ahụmịhe gị.
Kuki 3.a.3 arụ ọrụ
Kuki maka ịrụ ọrụ na-enyere anyị aka ịnye gị ọrụ ndị ọzọ na saịtị anyị dịka ịhazi onwe gị yana icheta mmasị ndị echekwara. Functionalityfọdụ kuki nwekwara ike ịdị nkpa iji kuki sie ike, mana ọ bụchaghị ị ga-adaba na ụdị ahụ.
3.a.4 Ichepu kuki
Ọ dị mkpa ka anyị mata mgbe na mgbe ole ị gara n’ Ourntanet, oleekwa akụkụ ndị nke i jigoro (gụnyere peeji ndị ị garala na nke njikọta ndị ị gara). Dika odi na nyocha Kuki, ihe omuma a na enyere anyi aka ighota gi nke oma, n’aka nke ya, ime ka Ulo saịtị na mgbasa ozi anyi kwekorita na nma gi. Enwere ike ịkekọrịta ụfọdụ ozi ezuru site na ịchekwa kuki na ndị ọzọ.
3.a.5 Kuki ndi nke ato
Ihe ato ndi anyi adighi edebe Cookies. kama, ndị ọzọ na-enye anyị ọrụ na anyị ma ọ bụ gị. Enwere ike iji kuki ndị ọzọ site na ọrụ mgbasa ozi iji jee ozi mgbasa ozi ahaziri gị na saịtị anyị, ma ọ bụ ndị ọzọ na-enye anyị ọrụ nyocha (Kuki ndị a ga-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka kuki akọwara n’elu).
3.a.6 Cookies na-adịgide adịgide
Ofdị kuki niile dị n'elu nwere ike ịbụ kuki na-adịgide. Kuki na-adịgide adịgide bụ ihe ndị dịgidere na kọmpụta gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị oge akara aka, na-arụkwa ọrụ oge ọ bụla ị gara na saịtị anyị.
3.a.7 Oge eji emekọ nri
Ofdị ụdị kuki ndị a dị n'elu nwere ike ịbụ kuki nnọkọ. Oge kuki bụ nwa oge ma ọ bụrụ naanị na ị nọrọ na kọmpụta gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị site na ebe ị gara na saịtị anyị ruo mgbe imechi ihe nchọgharị gị. Oge a na-ehichapụ kuki oge ị mechiri ihe nchọgharị gị.
1.4 Kuki na saịtị anyị anaghị adịgide adịgide ọ ga-agwụ dị ka egosiri na okpokoro dị n'okpuru.
1.5 Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara data nkeonwe anyị na-anakọta ma jiri ya, ihe anyị nwere iji chekwaa data nkeonwe, ikike gị na ọrụ anyị, biko rụtụrụ aka na Iwu Nzuzo anyị ebe a.
1.6 Maka nkọwa ndị ọzọ akọwapụtara kuki anyị na-eji, biko rụtụrụ aka na tebụl dị n'okpuru.
Enwere ike idowe kuki ndị ọzọ na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị:
Aha kuki nzube Ọ Dị Mkpa
ESSZỌ Mepụta ma nogide n ’ebe ị na-abanye. Achọrọ ka ị nọrọ wee banye, rue mgbe ị na-apụ. Echekwara maka ọnwa 1 Ee
Ederede peeji ọdịda, yana isi mmalite nke nleta gị, nke ejiri mee ihe maka nyocha na nsuso iji nyere anyị aka ịmata ebe okporo ụzọ weebụ anyị sitere, site na ntinye aka na ndị na-ajụ ase. Echekwara maka ọnwa 6 Ee
na ndị ọzọ ndị ọzọ a nwere ike itinye kuki na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị:
Google Inc Nchịkọta Google Universal maka ndị ọrụ nsuso na okporo ụzọ ndụ na weebụsaịtị anyị. Ejiri iji chọpụta ọnọdụ dị na okporo ụzọ ma nyere anyị aka imeziwanye nnweta na weebụsaịtị. Na -ebi naanị maka awa 24. NJ pụrụ iche nke emelitere ebe nrụọrụ weebụ gị.
_ga Google Inc Nchịkọta Google Analytics, ejiri na-elele nleta na weebụsaịtị a wee chọpụta usoro na ọnọdụ dị na ngagharị na saịtị ahụ, iji anyị nyere aka na-enyere aka ịgagharị na weebụsaịtị ma chọpụta isi mmalite okporo ụzọ weebụ anyị.
Google Inc Ejiri iji nyere aka kuki Google Analytics ndị a dị elu mgbe ị na-emegharị na mobile.Persist ruo ọnwa 6
Saịtị anyị na-eji ọrụ nchịkọta nke Google Analytics nyere. Nchịkọta weebụsaịtị na-ezo aka n'ọtụtụ ngwaọrụ ejiri na-anakọta ma nyochaa ozi ojiji na-enweghị aha, na-enyere anyị aka ịghọta nke ọma otu esi eji saịtị anyị. Nke a, n'aka nke anyị, na-enyere anyị aka imeziwanye saịtị anyị na ngwaahịa NA / MA ọrụ enyere site na ya. Ikwesighi ikwe ka anyi jiri kuki ndị a, agbanyeghị na etu anyị si eji ya anaghị ewetara ihe nzuzo gị ọ bụla ma ọ bụ iji saịtị anyị na-enweghị nchebe, ọ na-eme ka anyị nwee ike ịkawanye saịtị anyị, na-eme ka ọ kawanyewanye mma. ahụmịhe bara uru maka gị.
Nchịkọta ọrụ (saiti) nke saịtị anyị na-eji kuki anyị iji kpokọta ozi achọrọ.
Nchịkọta ọrụ (saiti) nke saịtị anyị na-eji kuki ndị a:
Aha kuki Zọ nke mbụ / nke atọ
Nke atọ Google Inc Nchịkọta Google Analytics, ejiri na-elele nleta na weebụsaịtị a wee chọpụta usoro na ọnọdụ dị na ngagharị na saịtị ahụ, iji anyị nyere aka na-enyere aka ịgagharị na weebụsaịtị ma chọpụta isi mmalite okporo ụzọ weebụ anyị.
_gid Nke atọ Google Inc Nchịkọta Google Universal maka ndị ọrụ nsuso na okporo ụzọ ndụ na weebụsaịtị anyị. Ejiri iji chọpụta ọnọdụ dị na okporo ụzọ ma nyere anyị aka imeziwanye nnweta na weebụsaịtị. Na -ebi naanị maka awa 24. NJ pụrụ iche nke emelitere ebe nrụọrụ weebụ gị.
_gat Nke atọ Google Inc Ejiri iji nyere aka kuki Google Analytics ndị a dị elu mgbe ị na-emegharị na mobile.Persist ruo ọnwa 6
Nkwenye na Njikwa
1.1 Kuki kuki emere na kọmpụta gị ma ọ bụ na ngwaọrụ gị na saịtị anyị Site na ịga na Saịtị anyị ị na-enye nkwenye gị na ịtụkwasị kuki ị na-enyere anyị aka ịnye gị ahụmihe na ọrụ kachasị mma.
1.2 Na mgbakwunye na njikwa anyị na-enye, ị nwere ike ịhọrọ iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ kuki n'ihe nchọgharị intaneti gị. Imirikiti ihe nchọgharị ntanetị na-enyere gị aka ịhọrọ ma ịchọrọ iji gbanyụọ kuki niile ma ọ bụ naanị kuki ndị ọzọ. Site na ndabara, ọtụtụ ihe nchọgharị intaneti na-anabata kuki mana enwere ike ịgbanwe ya. Iji nwetakwuo nkọwa ndị ọzọ, biko gakwuru menu enyemaka dị na ihe nchọgharị intaneti gị ma ọ bụ akwụkwọ soro ngwaọrụ gị.
1.3 Njikọ ndị dị n'okpuru na-enye ntụziaka banyere otu esi ejikwa kuki na ihe nchọgharị niile.
3.a.3 Microsoft Edge: (Biko mara na enweghị ntuziaka akọwapụtara n'oge a, mana nkwado Microsoft ga-enwe ike inye aka)
3.a 5 Safari (iOS):
3.a.6 Mozilla Firefox: Ekwentị
3.a.7 gam akporo: (Biko zoo aka na edemede ngwaọrụ gị maka ihe nyocha nke ndị nrụpụta)
Mgbanwe na Iwu Aki
1.1 Anyị nwere ike ịgbanwe Iwu Aki na oge ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị mere nke a, a ga-akọwapụta nkọwa nke mgbanwe ndị a n'elu nke ibe a. Mgbanwe ndị dị otú a ga-adịgide gị na ojiji mbụ nke saịtị anyị mgbe mgbanwe ndị a mechara. A na-adụ gị ọdụ ka ị lelee peeji a site n'oge ruo n'oge.
1.2 Ọ bụrụ na enwegodi esemokwu ọ bụla n'etiti ụdị nke Iwu Kuki a na ụdị (s) ọ bụla gara aga, ihe dị ugbu a ma na nsonaazụ ahụ ga-emeri ọ gwụla ma ekwuputara ya n'ụzọ ọzọ.
1.1 Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara otu anyị si eji kuki, biko kpọtụrụ anyị na [Email na-echebe] ma ọ bụ site na ekwentị na 01323 332 838, ma ọ bụ site na mbipụta na 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex, BN25 3ES.
1.2 Maka ozi ndi ozo banyere nzuzo, nchedo data yana usoro na onodu anyi, biko gide ihe ndi a: